शिक्षण अस्पतालमा ढुंसीका कारण दुई जनाको आँखा निकालियो, को हुन् उनीहरु ? – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/शिक्षण अस्पतालमा ढुंसीका कारण दुई जनाको आँखा निकालियो, को हुन् उनीहरु ?
काठमाडौं । को रोना संक्रमण पछि भारतमा खतरनाक तरिकाले फैलिएको ढुँसी नेपालमा पनि देखिएको छ । काठमाडौ स्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा यस्तै समस्या भएका दुई जनाको आँखा निकालिएको छ ।
अस्पतालले म्युकरमाइकोसिसका दुई संक्रमितको शल्यक्रिया गरेर आँखा निकालिएको जनाएको छ । को भिड संक्रमणपछि म्युकरमाइकोसिस संक्रमित भएका उनीहरूको आँखा निकालेर कृतिम आँखा राखिएको छ ।
नेपालगञ्ज घर भएका ५८ वर्षीय पुरुष र जनकपुरका ५० वर्षीय महिलालाई यस्तो समस्या भएको हो । उनीहरुको एक-एकवटा आँखा निकाली कृत्रिम आँखा राखिएको अस्पतालले जनाएको छ ।
को भिड संक्रमणपछि म्युकरमाइकोसिसको समस्या लिएर आएका ११ मध्ये ती दुई जनामा यस्तो समस्या देखिएको थियो । संक्रमण तेस्रो चरणमा पुगेको र अस्पताल भर्ना गर्दा ज्योति गुम्ने अवस्था भइसकेकाले आँखा निकाल्नुपरेको अस्पतालका म्युकर म्यानेज्मेन्ट कमिटी सदस्य डा। रविन्द्रभक्त प्रधानांगले बताए ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा हालसम्म १२ जना म्युकरमाइकोसिस संक्रमितको उपचार भइसकेको छ भने पछिल्लो समय भर्ना भएका २ जनामा संक्रमणबारे अनुसन्धान भइरहेको छ ।
अनुहार ,मुख , नाक , आँखा वरिपरी दुख्ने, ज्वरो आउने, आँखा र नाक सुन्निने रातो हुने वा दुख्ने, आँखाको ढकनी सुन्निने र ढकनी झुक्ने आँखाले धमीलो देख्ने, नाकबाट रगत बग्ने वा कालो बाक्लो सिंगान आउने, दाँत दुख्ने वा हल्लिने, नाकको वरिपरीको छालाको रंग कालो हुदै जाने
को रोनाको उपचारको क्रममा स्टेरोइड प्रयोग गरेका व्यक्तिहरु यसको उच्च जोखिममा रहेको स्वाथ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर जानकारी समेत गराएको छ । यस्तै चिकित्सकको सल्लाह बिना एन्टिबाइटिक वा अन्य औषधिको जथाभावी प्रयोग गर्नेहरु पनि म्युकरमाइकोसिस संक्रमणको उच्च जोखिममा छन् ।
शरिरको रोग संग ल ड् ने क्षमता कमभएका बेला यो रोगले बढी असर गर्ने जानकारहरु बताउँछन् । को भिड–१९ भइसकेका बिरामीहरुले माथीका कुनै पनि समस्या देखिए नजिकको विशेषज्ञसंग परामर्श लिनपर्ने दन्त चिकित्सक हरि प्रसाद वलीको सुझाव छ ।